Rwendo rwePhuket | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Chii chekuona, Tailandia
Iyi inotyisa ya2020 yapera. Tinogona kutanga kutarisira kuti tichasiya denda shure uye pane imwe nguva mune ramangwana tichazokwanisa kufamba murunyararo zvakare. Uye kana zvakadaro, zvakadii Phuket?
Phuket iri parera reThailand. Iyo yakanakisa kana iwe uchida paradisiacal mahombekombe, mafaro, zororo uye yepasi rese mamiriro. Mushure mehosha, nerombo rakanaka Phuket ichave ichiripo uye ichatigamuchira nemaoko akazaruka chaizvo.
Ndicho dunhu reThailand, iri kumaodzanyemba kubva munyika. Izvo zvakare Chitsuwa chikuru cheThailand muGungwa reAndaman. Ine yakanaka chinese simbaSaka kune akawanda maChinese matembere nemaresitorendi kwese kwese. Kune kana Mutambo weChinese Vezvirimwa unoitwa kamwe chete pagore, uchiwedzera kupemberera mukurumbira wenzvimbo yechiChinese yemuno.
Pghuket Chitsuwa ine mahombekombe mazhinji akanaka, kusanganisira Karon, Kamala, Kata Noi, Patong kana Mai Khao, uye pamwe inzvimbo yakanakisa yekuona kunyura kwezuva pasirese: Laerm Phromthep. Asi kwete zvese zviri pamhenderekedzo pano, zviripo zvakare mijenya yehusiku yehupenyu uye enhoroondo nzira izvo zvinokukoka iwe kuti uzive zvakapfuura.
Saka ngatitangei ne Old Phuket, iro guta rekareYakakura yekuongorora uye kusvika pakuziva iro guta nevanhu varo, maThai, maChinese, maEuropean nemaMuslim vakasarudza kugara pano. Iyo architecture Zviri mune dzakawanda zviitiko zveChinese - Chiputukezi maitiro, kumativi ese emigwagwa, uye iwo anoyevedza zvekuti mamwe akashandurwa kuita mamuseum kana maresitorendi kana zvitoro kana pekugara. Shanyira, semuenzaniso, iyo Phuket Thai Hua Museum.
Iko kuburikidza nemumigwagwa yenzvimbo yenhoroondo iyo iwe yaunogona kuravira gastronomy yemuno, tora mifananidzo yevanhu vanogara imomo uye uone tsika. Kana iwe uri paSvondo iwe unogona kunakidzwa nemusika wemugwagwa, iyo Lat Yai, yakanaka kuyedza marudzi ese ezvikafu.
Kusiya Old Phuket kunze kwenzira yakananga kumaodzanyemba. Ko Racha ine zviwi zviviri, Ko Racha Noi uye Ko Racha Yai. Ose ari maviri akanaka chena jecha mahombekombe uye sekristaro mvura yakachena yakanakira kudhizaivha. Ko Racha Yai yakagadzirirwa zvese zvivakwa, asi Ko Racha Noi ndiyo yakanakira kudhizaina uyezve chete mabhazi ehunyanzvi anotenderwa sezvo paine stingray uye chena shark.
Kune rimwe divi ndizvo chitsuwa chidiki cheKo Mai Thon, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwePhuket, 15 km chete, ine mamwe mahombekombe akanaka. Vafambi vane nguva shoma vanowanzopfuura nepano sezvo zvichisvika nekukurumidza nechikepe. Rimwe rinotonhorera gungwa iri Hat Patong. Iyo iri mune curvilinear bay ine jecha jena uye mukana wekudzidzira ese evashanyi emitambo yemvura. Panguva imwechete kune guta diki rakarikomberedza, rakashongedzerwa chero zvipi nezvitoro, chipatara, maresitorendi nemahotera.
Hat Nai Yang nderimwe gungwa, riri muSirinath National Park uye nebindu rakaisvonaka repine. Iyo yakakomberedzwa nemakorari matombo uye kune hwakawanda hupenyu hwemumvura, kunyanya turtle dzegungwa dzinouya kuzotanga kubva munaNovember kusvika Kukadzi. Izvi zvinosvikawo nemota, nemugwagwa, kubva kuPhuket, uchisiya guta reTalangalang kumashure. Pane rimwe divi, Hat suron Iyo igungwa diki pazasi pechikomo chakafukidzwa nemipaini miti yaimbove iri gorufu yaMambo Rama VII.
Mhenderekedzo yegungwa yakanyanyisa kukwira uye mune kunaya kwemamiriro ekunze mafungu ane simba kwazvo saka haugone kushambira. Kumahombekombe kuri Makiromita makumi maviri nemana kubva kuguta rePhuket. Rimwe runyararo runyararo uye rwakachena Hat Laem Imba, pamwe nematombo nemiti izvo zvinopa mumvuri. ingori 1 kiromita kubva kuHat Surin, kumaodzanyemba. Ndokunge, nemahombekombe mazhinji muPhuket chinhu chikuru ndechekunakidzwa nezuva, gungwa uye zviitiko zviri pamhenderekedzo: kufamba nechikepe, kudhiraivha, kubata nyoka, kufefetera mhepo, nezvimwewo.
Takataura pakutanga nezvazvo imwe yenzvimbo dzakanakisa pasi rose yekutarisa kunyura kwezuva: Laem Phromthep. Ndiyo nzvimbo yekumaodzanyemba kwechitsuwa, Cape, yakanaka yekutora mifananidzo yakanaka. Kubva pamucheto wedombo iwe unogona kuona mutsara wemichindwe unotsamira pamusoro pegomba rakadzika, pane matombo mugungwa uye mhiri kwawo kunowoneka chitsuwa cheKo Kae Phitsadan. Kune mwenje wechiedza zvakare, yakavakwa muGoridhe Jubheri raMambo Rama IX, uye kubva ipapo iwo maonero anosvika makumi matatu nemana makiromita.
Imwe nzvimbo inoyevedza yePhuket, inoshanyirwa nevashanyi vese, ndiyo Wat Chalong Tembere, nhoroondo yetembere inoyeuchidza chimiro chemumonki, Luangpho Chaem anobva kuWat Chalong, nyanzvi yekufungisisa kweVipassana nemishonga yechivanhu. Yakapihwa chinzvimbo chechechi naMambo Rama V uye zvinhu zvinotengeswa pano, mazango, zvinofungidzirwa kuti zvinounza dziviriro uye mhanza yakanaka. Imwe nzvimbo isingadzivisike ndeye Phuket Big Buddha, pachikomo, zvinoshamisira.
Iyo yakanaka nguva yekuenda kuPhuket, kana iwe uchida kupati, ndiyo enda kuPhuket Chinese New Year, chaiko mushure megore Idzva reChinese. Chinangwa chemutambo uyu wechipiri ndechekuratidza hupenyu hwenzvimbo yeguta uye nekupa vashanyi ruzivo rwakakura sezvo dzakawanda dzemigwagwa yenzvimbo yenhoroondo dzakavharwa kumotokari uye kuva vafambi.
heyi mavara ane mavara, vanhu vakapfeka zvipfeko zvechinyakare, kuratidzira kwekudya, zvitoro zvekudya kwese kwese nezvimwe zviitiko. Zuva rekupedzisira izuva reMunamato, tsika yekare yemuno.
Kutevera mafungu ezviitiko nevanhu vazhinji muPhuket ndiyo Phuket Fantasea theme paki, chiratidziro chakatsaurirwa mutsika dzeThai. Chinhu chakanakisa nezve izvi kuita kunodaidzwa Kushamisika Kamala, musanganiswa wehunyanzvi hweThai netsika zvine mutsindo, mwenje nemumhanzi uye dzinopfuura nzou gumi nedzimwe mhuka mudariro hombe. Buffet inopihwa uye kune zvitoro zvekuyeuchidza futi. Inovhura mazuva ese kunze kweChina, kubva 10:5 am kusvika 30:11 pm.
Parizvino, kuongororwa kwehunyanzvi hwePhuket, asi tisati tapedza tinosiya zvimwe matipi ekufamba kuenda kuPhuket:
. Mahombekombe pamhenderekedzo yekumaodzanyemba anogara aine vanhu vazhinji, nepo iwo ari kuchamhembe akadzikama uye aine vanhu vashoma. Mutambo uri kumaodzanyemba.
. Iwo ese mahombekombe akakura (Kata, Karon, Nai Han, Patong, Nai Han, Nai Yang, Mai Khao), ane zvivakwa nemidziyo yekudonha, kufefetera kwemhepo uye kufamba nechikepe.
. Phuket inzvimbo yakachengeteka, kunyangwe nehusiku.
. Unogona kufamba-famba neguta ne tuk-tuk, kune matekisi, mabhazi, dzinodhara midhudhudhu uye mota. Ma tuk-tuk pano haana kufanana neaya ari muBangkok, asi ane mavhiri mana uye akatsvuka kana yero. Mabhazi, iyo Phuket Smart Bhazi, anoenda kubva kumahombekombe kuenda kumahombekombe, uye kubva kunhandare, uye ari nyore. Iwe unotenga Kadhi reTsuro kumusoro kana muchitoro uye ndizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Chii chekuona » Phuket rwendo
Chii chaungaona muBaiona, Galicia